Finday mampiaraka - Wikipedia
Finday mampiaraka — Wikipedia
Finday mampiaraka asa, fantatra ihany koa ho toy cell mampiaraka, finday mampiaraka, na finday mampiaraka, mamela ny olona mba chat, mpanadala, hihaona, ary mety ho lasa mampiaraka anjara amin’ny alalan’ny hafatra, finday mifampiresaka, sy ny finday tranonkala. Ireo asa mamela ny mpampiasa mba hanome vaovao momba ny tenany, ao amin’ny fohy ny mombamomba azy izay dia na voatahiry ao amin’ny finday ho toy ny mampiaraka ID na ho toy ny solonanarana ao amin’ny finday mampiaraka toerana. Izy ireo dia afaka fikarohana ho an’ny hafa Id aterineto, na amin’ny alalan’ny antso iray nomeraon-telefaonina ny nanonona ny asa fanompoana. Ny fepetra dia ahitana ny taona, lahy sy ny vavy firaisana ara-nofo kokoa. Matetika toerana ireo dia afaka ny hampiasa izany fa fitsipika hafatra saram mety mbola mihatra ihany koa ny sarany kely ny fanompoana mampiaraka ny fiampangana isam-hafatra. Finday fiarahana tranonkala, mba hampitombo ny fahafahana ho an’ny fivoriana, ny saina hifantoka tany amin’ny mpampiasa izay mizara izany amin’ny tambajotra sosialy ary akaiky. Misy orinasa dia manolotra asa toy ny homing fitaovana mba mailo mpampiasa rehefa mpampiasa iray hafa dia ao anatin’ny telopolo tongotry ny hafa. Ny sasany rafitra tafiditra Bluetooth ny teknolojia mampifandray ny mpiserasera ao amin’ny toerana toy ny trano fisotroana sy ny clubs. Izany dia fantatra amin’ny hoe akaiky ny fiarahana. Ireo rafitra ireo raha ny marina dia malaza kokoa any amin’ny firenena sasany tany Eoropa sy Azia noho ny fiarahana amin’ny aterineto. Noho ny fahatongavan’ny ny GPS Finday sy ny GSM-toerana, akaiky mampiaraka dia azo inoana fa mba hitsangana mafy amin’ny lazany. Araka Ny the San Francisco Chronicle, ‘Finday mampiaraka ny lehibe manaraka dingana ao anaty aterineto mifanerasera.
tapitrisa finday mpampiasa tafiditra ao finday toerana fiarahana tamin’ny volana Martsa, amin’ny mpampiasa indrindra lavo eo ambanin’ny taona isan-karazany. Misy manam-pahaizana mino fa ny fiakaran’ny finday mampiaraka dia noho ny laza tsy mitsaha-mitombo ny fiarahana amin’ny aterineto. Ny hafa kosa mino izany dia rehetra momba ny safidy, satria Joe Brennan, Jr., filoha lefitry ny Tranonkala daty milaza hoe: ‘Tsy momba ny fanomezana ny olona ny safidy. Tsy maintsy mampiaraka amin’ny ny solosaina. Afaka mampiaraka ao ny handset, izany rehetra mikasika ny famelana ny olona manapa-kevitra hoe inona no lalana tsara indrindra ho azy ireo. ‘Iray vao haingana izay dia namoaka ny fandalinana dia mampiseho fa amin’izao fotoana izao. tapitrisa tokan-tena any ANGLETERA mitady mpiara-miasa online isam-bolana. Ity dia efa nitombo avy (. tapitrisa). Io fitomboana io dia voalaza fa vokatry ny Finday Niaraka noho ny amin’izao fotoana izao sosialy mampiaraka asa toy ny Tinder na Lahatsary Mampiaraka, izay mamela ny olona ny malaky manao vaovao fifandraisana an-dalana. Ny fitomboan’ny finday mampiaraka ary indrindra indrindra, ny fiarahana amin’ny fampiharana Tinder niova ny fomba ny olona hihaona mety ho mpiara-miombon’antoka sy ny daty. Ny sasany mino fa ny fihanaky ny fampiharana toy izany no nahatonga maoderina mampiaraka ny fitondran-tena. Ny sasany tsy ireo asa noho ny tahotra fa ny teknolojia dia mety ho azo ampiasaina elektronika manadala mpampiasa. Olana iray hafa dia ‘asymmetry ny tombontsoa’, aho. e. manintona ny mpikambana dia mandray be loatra ny sainy sy ny ravina, izay mety hiafara amin’ny fahasimban’ny ny maha-mpikambana. Ao ny Daty Finday Mampiaraka ny Fihaonambe, ny voalohany indrindra ny mpanjifa vondrona fifantohana ho an’ny finday mampiaraka fampiharana niara-namerimberina ny toy izany koa ny fitarainana avy amin’ny taona mialoha. Mpandray anjara rehetra nanana ahiahy mikasika ny mety. Ireo olana isan-karazany eo amin’ny mpandray anjara sy ny tafiditra ara-batana, — pihetseham-po sy ara-nofo mety, ny mety ho scammed, ny mety mahita mampidi-doza sy am-pasana ny olona, ny mety ho bevohoka, mety ny fianakaviana, ny mety ho lainga sy ny fitaka. Mba hanoherana ireo loza mety hitranga, mpandray anjara nanaiky hetsika isan-karazany izay atao ny mampiasa ny teknolojia sy fitaovana misy ho azy ireo, ary koa ny fanombanana ny fomba hafa ve, na dia tsy mampiasa ny teknolojia. Miditra amin’ny vanim-potoana samihafa miaraka amin’ny maro ny fivoarana ara-teknolojia ‘techno vanim-potoana ara-nofo’, isika koa dia hiditra amin’ny vanim-potoana samihafa mampiaraka kokoa ‘sexualized’. Finday niaraka nanomboka maka endrika ao. Ny fanomezam-pahefana Mampiaraka dia iray amin’ireo voalohany mampiaraka asa mampiasa Bluetooth. Amin’ny Match, Malagasy ny daty sy ny ranoka volkano fiainana dia ny finday niaraka tany am-boalohany mpitarika. Tsy mandra-ny iPhone tonga tao fa ny finday niaraka nanala. ny taona finday mampiaraka lasa mahazatra. Manomboka avy, finday mampiaraka dia nisy tsikelikely ny hanjo ny fiarahana amin’ny aterineto. Lalao sy ny POF ankehitriny jereo ny ny vatan-kazo-ins avy amin’ny finday. Ny finday niaraka tsena no antenaina hitombo $. B. H Mampiaraka no mipongatra ho toy ny H ny tambajotra sy ny Lahatsary amin’ny Finday ho tonga bebe kokoa ny olona. Ny mety ho iray-ny-video antso manome fiarovana fanampiny izany ary manampy miantoka ny mpikambana no tena izy. Ny fiarahana amin’ny tsena, na amin’ny aterineto na mampiaraka toerana fampidirana ny finday aterineto dikan-teny sy ny fampiharana ny finday. Ny toerana sasany dia natolotra araka ny finday ihany no ho an’ny Finday sy fisaka Sy mivelatra, tsy misy ny fidirana amin’ny aterineto dikan -. Finday mampiaraka ny fampiharana tsena dia tombanana ho mendrika ny $.
Tinder efa hatramin’ny par mifaninana eo amin’ny tsena ity ‘ny volana ôktôbra, ny fampiharana dia manana mihoatra noho ny dimam-polo tapitrisa mpampiasa’ ary izany koa dia sarobidy ‘na aiza na aiza, avy amin’ny $ tapitrisa $ lavitrisa’. Isika dia miaina haingana dia haingana sy tena ‘exponential fitomboana’ ny ankamaroan ‘ ireo fiarahana tranonkala famoronana fampiharana plus mampiaraka fampiharana irery rehetra ampiasaina amin’ny alalan’ny finday
← Fiarahana tsy misy fisoratana anarana
Tranonkala an-tserasera Niaraka →